समस्या नै समस्याको बिचमा पनि हामी गज्जबसँगले बाँचिरहेकाछौँ । लोडसेडिङ, पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्दि अनि पानीको अभावको बिचपनि हामी आफ्नो जिविका चलाइरहेकाछौँ । हामीलाई बाँच्नको लागि अत्यावश्यक पानीको महत्व कति छ भन्ने कुरा मैले यहाँ लेखिरहनु पर्दैन होला, किनकी हामी सबैलाई थाहा छ, पानीविना हाम्रो जिवन चल्न सक्दैन । हामीलाई यो पनि थाहा छ, काठमाडौँमा पानीको हाहाकार कति छ! पानी भर्नको लागि लाइनमा घन्टौँ बस्नुपर्ने अनि पानी नदेखिने बाग्मतीको बारेमा, हामीलाई काठमाडौँमा पानी पाइन्थ्यो, बाग्मतीमा पौडि खेल्थ्यौँ, बाग्मतीको माछा खान्थ्यौँ जस्ता कुराहरु भनिँदा परापूर्वकालको कथाहरु जस्तो लाग्ने गर्छ । तर काठमाडौँमा पानी देखेका, बाग्मतीमा पौडि खेल्नेहरु भन्छन्, २० वर्ष अघिसम्म पनि बाग्मती धेरै राम्रो थियो, काठमाडौँमा यति ढुंगेधाराहरु थिए कि, पानीको कुनै समस्या नै हुँदैनथियो । अहिले त खै, न बाग्मतीमा पानी देखिन्छ न ढुंगेधारा नै देखिन्छ । कहिँकतै ढुंगेधारा देखिइहाले पनि पानी भने देखिँदैन । काकाकुलको जिवन बाँचिएपनि, कहिले पूराहुने छाँट नदेखिएको मेलम्चीको पानी सम्झिँदै, कुनै बेला त मेलम्ची पनि आउल
Highway – Nepali Movie Official Theatrical Trailer Released
Aakar April 28, 2012
The most awaited Nepali Movie ‘Highway’ which is set to release on 15th June 2012 (असार १, २०६९) has released its official theatrical trailer today on YouTube. The first crowd funded Nepali movie ‘Highway’, which has been creatingabuzz ever since it went into production was screened at one of the most prestigious film festival ‘Berlin Film Festival 2012’ on February. Directed by Deepak Rauniyar and produced by Dr. Sameer Mani Dixit, Dr. Lonim P Dixit. Joslyn Barnes and Danny Glover, the movie is believed to be another milestone in Nepali film industry. Highway movie trailer was first released on last September in Kathmandu. Highway – Official Theatrical Trailer Synopsis: Set among the breathtaking landscapes of Eastern Nepal, HIGHWAY, the first full-length feature of director Deepak Rauniyar, follows the journey of nine characters whose individual stories become accidentally interconnected during an ill-fated bus journey to the capital Kathmandu. The passengers — each
विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Program – WFP) को अनुसार भोकमरी (hunger) विश्वको सबैभन्दा ठूलो समाधान गर्न सकिने समस्या हो ! करिब १० करोड मानिसहरु अहिले खाद्यान्नको अभावमा भरपेट खान पाइराखेका छैनन् । क्लाइमेट चेन्ज (Climate Change) र बढ्दै गरेको जनसंख्याको कारणले गर्दा सन् २०५० सम्ममा यो संख्या दोब्बर भएर २० करोड पुग्ने अनुमान गरिएकोछ । यो समस्याको तत्काल समाधानको लागि विभिन्न किसिमका खाद्यान्न सहयोग कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएपनि यसको दिर्घकालिन समाधान भने खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्नु नै हो । राम्रो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सके, आकाशे पानीमा भर परेर गरेको खेती भन्दा दुई देखि पाँच गुना सम्म बढि खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिन्छ ! तर धेरै जस्तो विकसित देशमा पानीको समस्या भएकोले सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन त्यति सजिलो भने छैन । यस्तै खाद्यान्नको समस्या नेपालले पनि भोगिरहेकोछ । नेपाल खाद्यान्न आयात गर्ने देशहरु मध्येमा परे पनि अरु देश जस्तो सुख्खा छैन, नेपालमा प्रशस्त खोलानाला छन्, नेपाल जलश्रोतमा धनि छ । तर नेपालको भौगोलिक वनावटको कारणले गर्दा विशेष गरी पहाडी भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउ
नर्बिसिने त्यो दिन [सन्दर्भ: लोकतन्त्र दिवस]
Aakar April 23, 2012
नरेन्द्र रौले मेरा लागी बैशाख ९ गते एउटा नमिठो अतित बोकेर आइदिन्छ । स्मृतिमा गहिरोसँग बसेको त्यो दिन मनबाट कहिल्यै हराउने छैन । सधैँ सम्झाइरहने चिनो छ म संग । जो कहिल्यै मेटिने छैन । अनि सधैँ याद दिलाइरहने चोट छ म सँग जो कहिल्यै निको हुने छैन । यिनै बैशाखि दिनहरुमा पाँच वर्ष अघि सडक बेस्सरी तातेको थियो । स्थायी शान्ति, आशा र परिबर्तनको पक्षमा नेपाली जनताहरु शसक्त रुपले जुर्मुराएका थिए । गाउँ देखी शहर गहिरो निद्राबाट ब्युँझिएको थियो । नयाँ नेपाल बनाउने सपना बोकेर परिबर्तनको पक्षमा मुठ्‍ठिहरु उठेका थिए । सारा नेपालीहरुको आवाज शान्ति र गुमेका आफ्‍ना अधिकारका पक्षमा बुलन्द रुपमा गुञ्जिएको थियो । त्यही आशा, सम्भाबना र परिबर्तनको राजमार्गमा म पनि थपिएको थिएँ। बैशाखको चर्को गर्मी निकै बढेको छ । सारा जनताहरु सडकमा ओर्इरिएका छन्‍ । एकातिर तत्कालिन बिद्रोहि शक्ति माओबादी र अर्कोतिर राजाको प्रत्यक्ष निरंकुश शासनबाट जनताहरु आजित बनेका छन्‍ । दिनदिनै हत्या, हिंसा, बढ्‍दो छ । उकुसमुकुस हुने यस्तो परिस्थीतिबाट नागरिकहरु मुक्ति खोजिरहेका छन्‍ । त्यसैले मनमा
फेसबुक, इन्स्टाग्राम, फ्लिकर, पिकासा लगायतका साइटहरुमा दैनिक लाखौँ फोटोहरु अपलोड हुने गर्छन् । यसका अतिरिक्त इन्टरनेटमा अन्य सयौँ फोटो सेयरिङ साइटहरु पनि छन् । भर्खरै पनि फेसबुकले फोटो सेयरिङ मोबाइल एप्स इन्स्टाग्रामलाई महंगो मुल्य तिरेर किनेकोछ । हामीले खिच्ने प्रत्येक फोटोले कुनै न कुनै कथा बोकेको हुन्छ, चाहे त्यो प्रोफेशनल क्यामराले खिचिएको होस् वा साधारण मोबाइलबाट खिचिएको होस् । हामीले ती फोटोका कथाहरु फेसबुक, ट्विटर, फ्लिकर, पिकासा, मुभी मेकर, आईफोटो आदि विभिन्न साइट र विभिन्न टुलहरु मार्फत सेयर गर्ने गरेकाछौँ । यही फोटोहरुको कथा भन्ने भन्ने मेसोमा नेपाली सफ्टवेयर ‘पिकोभिको’ पनि थपिएकोछ । मुभी मेकर, पिकासा, आईफोटो आदि चलाइरहेका प्रयोगकर्ताहरुलाई भर्खरै बजारमा आएको नेपाली सफ्टवेयर ‘पिकोभिको’ (Picovico) बारेमा भने खासै जानकारी नहुन सक्छ ! पिकोभिको (Picovico) फोटोहरुलाई भिडियो (Photos to Videos) मा छिटो र छरितो सँग बदल्ने फ्रि “वेब वेस्ड एप्लिकेशन” (Web based Application) हो, जसबाट सजिलोसँग आफूले चाहेको थिम (theme), संगित (Music) र शब्द (Text) राखेर फोटोहरुलाई भिडियोमा बदल्न सकिन्छ
Aakar April 21, 2012
Suddenly I have an urge to go back to that place again To the heavenly darkness i truly never really feared My own lil' room filled with nothing but candles of love Back to my "Mother's Womb" which was so mesmerizing n divinely real.... I felt magically Blessed when i was inside of You Mother Listening to your heartbeat, surrounded by angels from up above How proud you were to carry me around for nine Tough months Made me feel bold,extremely safe n very much loved..... Even though I'm all grown now,settled in my own world I miss your embrace,kisses on my forehead all the gestures n the care How you protected me from every Thunderstorm that came my way I miss you holding me in your arms n saying everything will be okay dear.... How can I ever thank you enough Mom For my first word,my first step n everything you've done You're the reason I’m here today breathing and smiling You r the power in my prayers n the melody to my so
अमेरिकी राष्ट्रपति वाराक ओवामाले आफ्नो राष्ट्रपतिको चुनाव प्रचारको लागि सोसलमिडियाको भरपुर उपयोग गरेका थिए । सोसलमिडियामा गरिएको व्यापक ‘क्याम्पिङ’का कारण ओवामालाई राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा सफलता मिलेको थियो ! ओवामा त एउटा प्रतिनिधी पात्र मात्रै हुन् ! हिजोआज सोसल मिडियालाई पत्रकार, कलाकार आदिले मात्र होइन राजनितिज्ञले पनि अंगाल्दै गइरहेकाछन् । भेनेजोएलाका राष्ट्रपति ह्युगो चाभेज देखि लिएर क्युवाका फिडेल क्यास्ट्रो, अनि भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह लगायतहरुले ट्विटरमा आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेकाछन् । आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउन भनौँ वा जनतामाझ पुग्नको लागि राजनितिज्ञहरुले हिजोआज सोसलमिडियाको भरपुर उपयोग गर्न थालेकाछन् ! वर्षदिन अघिको खबरलाई साँचो मान्ने हो भने, भेनेजोएलाका राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजले आफ्नो ट्विटर व्यवस्थापनको लागि करिब २०० कर्मचारी खटाएका थिए । संसारभरी फैलिएको सोसलमिडियाको ज्वरो, नेपालमा बिस्तारै छिर्दै गएकोछ । केही नेपाली कलाकारहरु र नेपाली ब्रान्डहरुले सोसलमिडिया विशेषत फेसबुकमा आफ्नो उपस्थिति जनाएका भएपनि नेपाली राजनितिज्ञहरु फेसबुक तथा ट्विटरमा भेट्न मुस्किल नै पर्छ भ
आज देखि नयाँ वर्ष २०६९ लागेकोछ ! हुन त दिन, हप्ता, महिना उनै हुन् ! बिहान, दिउँसो, बेलुका अनि रातीको आफ्नो ‘टाइमटेवल’ पनि उही नै हो ! तर पनि नयाँ वर्ष भन्ने बित्तिकै, आजको शुक्रबार अन्य शुक्रबार भन्दा पृथक र विशेष छ । यो शुक्रबार नयाँ वर्षको दिनमा परेको छ ! मान्छे उही नै हुन्, सोच उनै हुन् तर पनि नयाँ वर्ष लागेपछि हामी केही राम्रो सोच्ने प्रण गर्छौँ, राम्रो गर्ने प्रण गर्छौँ ! आफ्ना आशा र विश्वासलाई अझ दरिलो पारेर, अघि बढ्ने कुरा नै हुने गर्छन्, वर्षको पहिलो दिनमा ! तर वर्षको अन्त्य सम्म आइपुग्दा, आफूले सोचेका – नसोचेका अनगिन्ती कुराहरु हुन्छन् ! अनि वितेको वर्षलाई नियाल्दा, कुनै कुरा राम्रा लाग्छन्, अनि कुनै कुरा आफैँलाई झुर लाग्छन् । सायद नयाँ वर्ष, आफूले गरेका कामहरुलाई फर्किएर हेर्ने स्थान पनि होला, अनि सकरात्मक सोच्ने समय होला । २०६८ मेरा लागि निकै महत्वपूर्ण वर्ष रह्यो ! २०६८ मा इन्जिनियरिङ पास गरियो, पहिलोपटक रेल अनि जेट चढियो, पहिलोपटक नै बेङ्लोर गइयो, इन्टर्नसिपको लागि ! हुन त जिन्दगीमा गरिने सबै कुराहरु पहिलोपटक नै हुन्छन्, तर पनि पहिलोपटक कुनै काम गरियो भने त्यसको बेग्लै
कतै धानै नफल्ने पो हो कि !
Aakar April 09, 2012
बर्खामास तामझामले खेत रोपियो छाँट देखेर छिमेकी छक्कै परे अब महिना दिन बाँकी छ बालि भित्र्याउन, सार्है पिर लागेको छ, कतै धानै नफल्ने पो हो कि भनेर !! भर परेर जस्तालाइ नि खेताला पठाइयो गोड्न छोडेर मुलाहरु हिलो छेप्दैमा भुलेछन अहिले खेतैभरि जम्मै झार छपक्कै छ शंकै लागेको छ, कतै धानै नफल्ने पो हो कि भनेर !! पल्लो गर्होमा लह लह बाला झुलेका छन् तल्लो गर्होमा झन् के भन्नु खै, उत्पातै छ मेरै गर्होमा भने पसाएको पनि छैन मन सार्है पोल्दै छ, कतै धानै नफल्ने पो हो कि भनेर !! त्यत्रो दुखले खेत फिर्ता पाइयो ऋण धन खर्चेर बालि लाइयो तर बुद्धि पुर्याउन सकिएन कि मल कुन्नि? एकदम डर लागेको छ, कतै धानै नफल्ने पो हो कि भनेर !! एकदम डर लागेको छ, संविधानै नबन्ने पो हो कि भनेर !! -By N®B Image via Keck
तपाई एन्डोइड फोन प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने, तपाईको लागि खुशीको खबर छ ! आईफोनको लागि मात्र उपलब्ध र करोडौँले रुचाएको, ‘पपुलर फोटो सेयरिङ एप’, ‘इन्स्टाग्राम’ अब एन्ड्रोइड फोनको लागि पनि आएको छ। तपाई आईफोनको प्रयोगकर्ता र ट्विटर एडिक्ट हो भने सायद तपाईले ‘इन्स्टाग्राम’ चलाएको हुनुपर्छ तर अहिलेसम्म चलाएको छैन भने पनि केही छैन, अब चलाउँदा हुन्छ ! आइफोन र एन्ड्रोइड दुवैको लागि इन्स्टाग्राम उपलब्ध छ ! तपाई मोबाइलबाट फोटो खिच्न रुचाउनुहुन्छ र अनलाइनमा आफ्नो फोटो सेयर गर्ने गर्नुहुन्छ भने, इन्स्टाग्राम तपाईको लागि उपयुक्त फोटो सेयरिङ एप हुनसक्छ ! के हो इन्स्टाग्राम? साधारण भाषामा भन्दा ‘इन्स्टाग्राम’ एउटा फोटो सेयरिङ एप्लिकेशन हो, जुन आईफोन र एन्ड्रोइडको लागि उपलब्ध छ ! आफूले मोबाइलबाट खिचेका फोटोहरुलाई, एपको माध्यमबाट अझ कलात्मक बनाइ, यसबाट अनलाइनमा सजिलो सँग आफ्नो फोटोहरु सेयर गर्न सकिन्छ । इन्स्टाग्राम पनि एकप्रकारको मोबाइल सोसल नेटवर्किङ साइट नै हो, जहाँ आफ्ना फोटोहरु अपलोड गर्न सकिन्छ, अनि ट्विटर कै जसरी साथीहरुलाई फलो गर्न सकिन्छ, अनि साथीहरुले तपाईलाई पनि फलो गर्न सक्छन् ! अनि तप
A Visit To Chaudandi Gadhi [PHOTO]
Aakar April 03, 2012
करिब अढाइ वर्ष पहिले मकवानपुरमा रहेको अनि भग्नावशेषमा मात्र सिमित रहेको मकवानपुर गढी गइएको थियो ! निकै जिर्ण अवस्थामा रहेको मकवानपुर गढीमा केही ढल्न लागेका दरबारका पर्खालहरु थिए ! केही महिना पहिले उदयपुर जाँदा श्रमिक पार्क को साथै चौदन्डी गढी पनि पुगिएको थियो, तर चौदन्डी गढीमा त झन् केही पनि रहेनछ ! स्कुलमा पढ्दा चौदन्डी गढीको बारेमा नि पढिएको थियो झैँ लाग्छ तर पनि अहिले यहाँ लेखिहाल्नलाई आफूलाई यसबारे धेरै कुरा थाहा छैन ! त्यही पनि चौदन्डी गढीमा रहेको, एतिहासिक दरवारका भग्नावशेषहरुको फोटो भने यहाँ राख्दैछु ! गाईघाटबाट उत्तर पूर्वमा चौदन्डी गढि रहेकोछ । चौदन्डी गढीका बारेमा जानकारी राख्ने साथीहरुले यसबारेमा तल कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ !
Nepali Movie Highway to Release on 15th June from Nepal
Aakar April 01, 2012
The most awaited Nepali Movie ‘Highway’ is set to release on 15th June 2012, (असार १ गते, २०६९) from Nepal. Before the release, Highway will be premiered on 14th June (जेठ ३२ गते). Distributor and producer Narendra Maharjan, who distributed the ‘ Loot ’ will be distributing the movie Highway. A first crowd funded Nepali movie ‘Highway’ , which has been creatingabuzz ever since it went into production was screened at one of the most prestigious film festival ‘Berlin Film Festival 2012’ on February. Directed by Deepak Rauniyar and produced by Dr. Sameer Mani Dixit, Dr. Lonim P Dixit. Joslyn Barnes and Danny Glover, the movie is believed to be another milestone in Nepali film industry. Highway movie trailer was first released on last September in Kathmandu. Synopsis: Set among the breathtaking landscapes of Eastern Nepal, "HIGHWAY", the first full-length feature of director/producer Deepak Rauniyar, follows the journey of nine characters whose individual stories